टाउको काटेको १८ महिनासम्म बाँच्यो कुखुरा - Karnalipatra
२६ असार २०७७, शुक्रबार मा प्रकाशित
एजेन्सी । कोलोराडो–के टाउको काटेपछि कुनै प्राणी बाँच्न सक्छ ? तपाईं भन्नुहुन्छ, बिलकुल बाँच्दैन । तर, आजभन्दा ७२ वर्षपहिले अमेरिकामा यस्तै अचम्मको घटना भएको थियो । यहाँ एउटा कुखुरा टाउको काटेको १८ महिनासम्म पनि जीवितै थियो ।
यो कुखुरालाई मि(याकल माइक नाम दिइएको थियो । १९४५ को १० डिसेम्बरमा कोलोराडोको फ्रुटा बस्ने किसान लायड ओल्सेनले आफ्नी पत्नी क्लारासँगै कुखुरा काट्दै थिए । उनीहरूले कैयौं कुखुरा–कुखुरी काटे । यस क्रममा लायडले साढे पाँच महिनाको एउटा कुखरा काटे । कुखुराको नाम थियो— माइक । तर, उनलाई यस कुराले अचम्ममा पा¥यो कि कुखुरा मरेन, बरु टाउको बिना नै हिँड्न थाल्यो ।
मि¥याकल माइकको चर्चा यतिसम्म चुलिएको थियो कि लायड ओल्सेनले यो कुखुरा हेर्न आउने मानिसका लागि टिकटकै व्यवस्था गर्नुपरेको थियो । उनले उक्त समयमा उक्त कुखुराबाट महिनाकै ४ हजार ५ सय डलरको आम्दानी गर्थे । आज ४ हजार ५ सय डलरको मूल्य ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ । यो कुखुराकै कारण लायड ओल्सेनको आर्थिक स्थितिमा पनि सुधार आएको थियो ।
बीबीसीको रिपोर्टअनुसार न्युक्यासल युनिभर्सिटीमा सेन्टर फर बिह्याभिएर एन्ड इभोलुसनमा कुखुरा विज्ञ डा. टम स्ल्डर्स भन्छन्, ‘कुखुराको टाउको उसको आँखाको कंकालको पछाडि एउटा सानो हिस्सामा हुने गर्छ ।’ रिपोर्टका अनुसार माइकको चुच्चो, अनुहार तथा आँखा निक्लेको थियो । तर, स्मल्डर्सका अनुसार कुखुराको मस्तिष्कको ८० प्रतिशत हिस्सा जीवितै थियो, जसका कारण माइकको शरीर, धड्कन, सास, भोक र पाचन तन्त्र चलि नै रहेको थियो ।